Koshesa Chikomborero Chako Chokushanda naJehovha! | Yokudzidza
Vakazvipa Nemwoyo Unoda​—kuTaiwan
Muchava “Umambo hweVapristi”
NYAYA YEUPENYU Zvinhu Zvikuru Zvandaita Mubasa roUmambo
Koshesa Chikomborero Chako Chokushanda naJehovha!
“Pfungwa Dzenyu Ngadzirambe Dziri Pazvinhu Zviri Kumusoro”
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Mauritian Creole Maya Mixe Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuMexico Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zande Zulu
Nharireyomurindi—Yekudzidza | October 2014
“Tiri vashandi pamwe chete naMwari.”—1 VAK. 3:9.
Vashumiri vaJehovha vagara vaine chikomborero chipi?
Ibasa ripi ratinofanira kukoshesa iye zvino?
Chii chinofadza chatinotarisira kuzowana mune ramangwana?
1. Jehovha anoona sei basa, uye izvi zvinoita kuti aitei?
JEHOVHA mushandi anofarira basa rake. (Pis. 135:6; Joh. 5:17) Izvi zvakaita kuti apewo vanhu nengirozi basa rinonakidza uye rinogutsa kuti vafarewo uye vagutsikanewo sezvaanoita. Somuenzaniso, akaita kuti Mwanakomana wake wedangwe amubatsire pakusika. (Verenga VaKorose 1:15, 16.) Bhaibheri rinotiudza kuti Jesu asati auya pasi pano, aiva padivi paJehovha kudenga ari “mhizha.”—Zvir. 8:30.
2. Chii chinoratidza kuti ngirozi dzagara dziine basa rinokosha uye rinogutsa?
2 Bhaibheri rose rakazara nemienzaniso inoratidza kuti Jehovha agara achipa ngirozi dzake basa. Pashure pekunge Adhamu naEvha vatadza uye vabudiswa mumusha wavo weparadhiso, Mwari “akaisa makerubhi kumabvazuva kwomunda weEdheni nebakatwa raibvira moto richitenderera nguva dzose kurinda nzira yaienda kumuti woupenyu.” (Gen. 3:24) Uye Zvakazarurwa 22:6 inoratidza kuti Jehovha “akatuma ngirozi yake kuti iratidze varanda vake zvinhu zvinofanira kukurumidza kuitika.”
VANHU VAKAPIWAWO BASA
3. Jesu akatevedzera sei Baba vake paaiva panyika?
3 Paaiva panyika, Jesu akaita basa raakanga apiwa naJehovha nemufaro. Achitevedzera Baba vake, Jesu akapawo vadzidzi vake basa rinokosha. Achiita kuti vanyatsonzwa shungu dzokuita basa racho, akavaudza kuti: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Uyo anotenda mandiri, iyewo achaita mabasa andinoita; uye achaita mabasa makuru kune aya, nokuti ndiri kuenda kuna Baba.” (Joh. 14:12) Achisimbisa kuti basa racho raifanira kukurumidza kuitwa, Jesu akatsanangura kuti: “Tinofanira kuita mabasa aiye akandituma achiri masikati; usiku huri kuuya pasina munhu anozogona kuita basa.”—Joh. 9:4.
4-6. (a) Tinobatsirwa sei nemashandiro akaita Noa naMosesi basa ravakanga vapiwa naJehovha? (b) Mabasa ose anopiwa vanhu naMwari akafanana papi?
4 Vanhu vakararama Jesu asati auya panyika vaitopiwawo mabasa anogutsa. Kunyange zvazvo Adhamu naEvha vakatadza kuita basa ravakanga vapiwa, pane vamwe vakaita zvavakanga vaudzwa naMwari. (Gen. 1:28) Noa akapiwa mirayiridzo yainyatsotaura mavakiro aaifanira kuita areka kuti vanhu nemhuka zvipone paizoitika mafashamo makuru. Akanyatsotevedzera zvaakanga audzwa naJehovha. Kudai asina kuzviita nemazvo, tingadai tisipo nhasi!—Gen. 6:14-16, 22; 2 Pet. 2:5.
5 Mosesi akanyatsotevedzera mirayiridzo yaakapiwa yemavakirwo aifanira kuitwa tebhenekeri uye yemarongerwo aifanira kuitwa vapristi. (Eks. 39:32; 40:12-16) Nanhasi tichiri kungobatsirwa nekuti akanyatsoita basa rake akatendeka. Tinobatsirwa sei? Muapostora Pauro akatsanangura kuti zvinhu izvozvo zvaiva muMutemo zvaiva mufananidzo “wezvinhu zvakanaka zvichauya.”—VaH. 9:1-5, 9; 10:1.
6 Basa rinopiwa vashumiri vaMwari rinosiyana-siyana zvichienderana nekuti chinangwa chaMwari chava padanho ripi pakuzadziswa kwacho. Kunyange zvakadaro basa rose ravanopiwa ragara richikudza Jehovha uye richibatsira vanhu. Ndizvo zvimwe chete nebasa rakaitwa naJesu asati auya pasi pano nepaakazouya. (Joh. 4:34; 17:4) Isuwo basa ratakapiwa mazuva ano rinokudza Jehovha. (Mat. 5:16; verenga 1 VaKorinde 15:58.) Rinomukudza sei?
ZVATINGAITA KUTI TIRAMBE TICHIKOSHESA MABASA ATINOPIWA
7, 8. (a) Tsanangura kuti vaKristu vakapiwa basa ripi mazuva ano. (b) Tinofanira kuita sei patinoudzwa zvekuita naJehovha?
7 Zvinoshamisa chaizvo kufunga kuti Jehovha akaita kuti vanhu vane chivi vave nemukana wokushanda naye. (1 VaK. 3:9) Vaya vari kuita basa rekuvaka Dzimba Dzemagungano, Dzimba dzoUmambo, uye mahofisi emapazi vari kuita basa rekuvaka chaiko sezvakaitwa naNoa naMosesi. Ungave uri kushanda pakugadzirisa Imba yoUmambo yenyu kana kuti pakuvaka mahofisi makuru kuWarwick, New York, koshesa chikomborero chauinacho pakuita basa iroro. (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.) Ibasa dzvene. Asi vaKristu vose zvavo vanoita basa rekuvaka vanhu kuti vave neukama hwakanaka naMwari. Basa iri rinokudzawo Jehovha uye rinobatsira vanhu vanoteerera. (Mab. 13:47-49) Sangano raMwari rinotiudza zvatinofanira kuita kuti basa iri rifambe zvakanaka. Dzimwe nguva tingatochinjwa basa ratinenge tichiita.
8 Vashumiri vaJehovha vakatendeka vagara vaine chido chokuteerera zvinenge zvataurwa nesangano. (Verenga VaHebheru 13:7, 17.) Tinogona kutanga tisinganyatsonzwisise kuti sei tiri kunzi tiite basa redu neimwe nzira. Asi tinonyatsoziva zvakanakira kuteerera zvinhu zvinenge zvaonekwa naJehovha kuti zvakakodzera kuti zvigadziriswe.
9. Ndezvipi zvinoitwa nevakuru panyaya yebasa zvinogona kutevedzerwawo neungano?
9 Chido chakasimba chine vakuru chokuita kuda kwaJehovha chinooneka panzira yavanotungamirira nayo ungano. (2 VaK. 1:24; 1 VaT. 5:12, 13) Vanoratidza kuti vanoda kushanda nesimba uye kufambirana nekuchinja kunenge kuchiita mamiriro ezvinhu. Pavanongoudzwa nzira itsva dzokuparidza nezveUmambo hwaMwari hwakagadzwa, vanobva vatotanga kudzishandisa. Kunyange zvazvo vamwe pakutanga vaizeza kuronga kuparidza nerunhare, kuparidza pazviteshi zvengarava, kana kuti kuparidza munzvimbo dzinowanikwa vanhu vakawanda, vakazoona zvazvakanakira. Somuenzaniso, mamwe mapiyona mana ekuGermany akasarudza kunoshanda imwe ndima yebhizimisi yakanga yava nenguva isina kushandwa. Michael anoti: “Takanga tava nemakore akati kuti tisingashandi ndima yemabhizimisi, saka kungozvifunga kwaiita kuti tinzwe mudumbu. Jehovha anofanira kunge akazviziva, nekuti akabva aita kuti tinakidzwe zvikuru neushumiri hwatakaita mangwanani emusi iwoyo. Takafara kuti takanga tashandisa mirayiridzo iri muUshumiri Hwedu hwoUmambo uye kuti tainge tavimba naJehovha kuti aizotitsigira.” Une shungu dzokumboedzawo nzira itsva dziri kushandiswa pakuita ushumiri mundima yenyu here?
10. Zvinhu zvipi zvakachinja musangano makore achangopfuura?
10 Pane dzimwe nguva pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuchinjwa musangano. Mumakore achangopfuura, mahofisi emapazi akati kuti akabatanidzwa. Kunyange zvazvo izvi zvakaita kuti hama nehanzvadzi dzaishanda mumapazi aya dzichinje mamiriro adzo ezvinhu, pasina kana nguva dzakanga dzava kuona zvazvainge zvakanakira. (Mup. 7:8) Hakusi kufara kunoita vashandi ava vanozvipira kubatanidzwawo pakuchinja uku kuri kuitika musangano raJehovha!
11-13. Vamwe vakasangana nematambudziko akaita sei pakachinjwa zvinhu musangano?
11 Tinogona kuwana zvidzidzo zvinokosha kune vaya vaishanda pamapazi akazobatanidzwa. Vamwe vainge vava nemakumi emakore vachishanda pamaBheteri emunyika dzavo. Mumwe murume nemudzimai vaiva mumhuri duku yeBheteri kuCentral America vakakumbirwa kunoshanda kuBheteri rekuMexico iro raiva nevashandi vakawanda zvakapetwa ka30 kupfuura kwavainge vabva. Murume wacho, Rogelio anoti: “Zvainge zvakaoma zvikuru kusiya hama neshamwari.” Imwe hama inonzi Juan, iyo yakakumbirwa kutamira kuMexico inoti: “Unoita sekuti wava kutanga kurarama patsva; unenge wava kutanga kutsvaga dzimwe shamwari. Zvinotoda kuti ugadziridze mafungiro ako kuti aenderane netsika nemagariro zveko.”
12 Vamwe vashandi vepaBheteri munyika dzekuEurope vakakumbirwa kunoshanda kubazi rekuGermany, vaiva nezvimwe zvakanga zvakavaomerawo. Vose vanofarira kuona makomo vanogona kunzwisisa kuoma kwazvainge zvakaita kune vaya vakatama vachibva kuSwitzerland vachisiya makomo eko eAlps anoyevedza. Uyewo vaya vakabva kuAustria vakambotanga vachisuwa mararamiro avaiita vari mumhuri yavo duku yeBheteri.
13 Vaya vaitama vachienda kune dzimwe nyika, vaifanira kutojairana nekugara mudzimba dzakasiyana nedzavaimbogara, kushanda nehama nehanzvadzi dzavaisamboziva, uye zvimwe kutodzidza basa idzva. Vaifanirawo kutojaira kupinda neimwe ungano uye kuparidza mundima itsva, zvimwe vachitoshandisa mumwe mutauro. Izvi zvinogona kuoma. Asi, vashandi vakawanda vepaBheteri vakabvuma kuzviita. Chii chakaita kuti vadaro?
14, 15. (a) Vakawanda vakaratidza sei kuti vanokoshesa chikomborero chokushanda naJehovha pasinei nekuti ibasa ripi ravari kuita? (b) Tinodzidzei pane zvavakaita?
14 Grethel anoti: “Ndakabvuma kutama nekuti ndaida kuratidza Jehovha kuti ndinomuda pasinei nekuti ndiri munyika ipi, ndiri kugara pai kana kuti ndiri kuita basa rei.” Dayska anoti: “Pandakafunga kuti Jehovha ndiye ainge atikumbira kutama, ndakabva ndangobvuma nemufaro.” André naGabriela vanobvumiranawo nazvo vachiti: “Takaona kuti tainge tatova nemukana wakakura wekuti tishumire Jehovha tisingaite zvatinoda isu. Takati, ‘Kana sangano raJehovha rikachinja zvimwe zvinhu, zviri nani kutevedzera zvarinotaura pane kuti tidhonzerane naro.’”
Chikomborero chikuru chatiinacho ndechokuita basa raJehovha!
15 Panobatanidzwa mapazi, vamwe vashandi vepaBheteri vanonzi vaende kunopayona. Izvi ndozvakaitika kune vashandi vakati kuti vepaBheteri pakabatanidzwa mahofisi ebazi reDenmark, Norway, neSweden kuva hofisi imwe chete yebazi reScandinavia. Vamwe vavo ndiFlorian naAnja, avo vakataura kuti: “Kuchinja kwatakaita basa kwakatinakidza kunyange zvazvo kwakanga kwakaoma. Zvinotifadza kuita basa raJehovha pasinei nekuti tiri kupi. Kutaura chokwadi, tinonyatsonzwa kuti takakomborerwa.” Kunyange zvazvo vazhinji vedu tingasafanira kuchinja seizvi, hatifaniri here kutevedzera hama idzi nehanzvadzi dzinozvipira kutanga kutsvaka Umambo? (Isa. 6:8) Jehovha anogara achikomborera vaya vanokoshesa chikomborero chekushanda kwavanoita naye pasinei nekuti vari kushandira kupi.
RAMBA UCHIKOSHESA CHIKOMBORERO CHAKO CHOKUSHANDA NAJEHOVHA!
16. (a) VaGaratiya 6:4 inotibatsira kuti tiitei? (b) Chikomborero chipi chikuru chinogona kuwanikwa nemunhu wose?
16 Sevanhu vane chivi, tinowanzozvienzanisa nevamwe, asi Shoko raMwari rinotiudza kuti tiise pfungwa dzedu pane zvatinokwanisa kuita pachedu. (Verenga VaGaratiya 6:4.) Vakawanda vedu hatina kupiwa mabasa okutungamirira musangano. Uyewo, hatisi tose tinogona kuva mapiyona, mamishinari kana kuti kushanda paBheteri. Aya mabasa akanaka zvechokwadi! Asi hatifaniri kumbokanganwa kuti chikomborero chikuru ndicho chatiinacho tose, chokuva vashandi pamwe naJehovha muushumiri hwechiKristu. Tinofanira kukoshesa chikomborero ichi!
17. Chii chatinoziva kuti chicharamba chichiitika munyika ino yaSatani, asi nei izvozvo zvisingafaniri kutiodza mwoyo?
17 Munyika ino yaSatani, pane zvimwe zvatingatadza kuita mubasa raJehovha. Mabasa emumhuri, utano hwedu kana kuti zvimwewo zvatisingagoni kuchinja zvinogona kutitadzisa kuita zvakawanda. Asi izvi hazvifaniri kubva zvatiodza mwoyo. Usambofa wakazvishora uchifunga kuti haukwanise kushanda naJehovha uchizivisa zita rake uye uchiita kuti vanhu vazive nezveUmambo hwake pose paunowana mukana. Chinotonyanya kukosha ndechokuti uri kushanda naye uchiita zvaunokwanisa uye uri kunyengeterera chikomborero chake pahama dzako dzinokwanisa kuita zvakawanda kukupfuura. Ziva kuti Jehovha anokoshesa munhu wose anorumbidza zita rake!
18. Chii chatinofanira kumbosendeka, uye nechikonzero chei?
18 Pasinei nekuti tine chivi uye tine zvatisingakwanisi kuita, Jehovha anofara kuti tishande naye. Zvechokwadi tinofanira kukoshesa chikomborero chatiinacho chokushanda naMwari wedu mumazuva ano ekupedzisira! Saka, tinofanira kubvuma kumbosendeka zvinhu zvatingashuva kuita, tichiziva kuti munyika itsva, Jehovha achatipa “upenyu chaihwo,” upenyu husingaperi hwatichararama tichifara uye tiine rugare.—1 Tim. 6:18, 19.
Unokoshesa chikomborero chauinacho chokushumira Mwari here? (Ona ndima 16-18)
19. Jehovha achatiitirei mune ramangwana?
19 Nyika itsva zvayadai kusvika, funga zvakaudzwa vaIsraeri naMosesi nguva pfupi vasati vapinda muNyika Yakapikirwa paakati: “Jehovha Mwari wako achaita kuti uve nezvakawandisa pamabasa ose oruoko rwako.” (Dheut. 30:9) Amagedhoni yapera, vaya vanga vakabatikana vachishanda naMwari vachange vava kugara munyika yaakavavimbisa. Pfungwa dzavo dzichange dzava pabasa idzva, rokuchinja nyika kuti ive paradhiso yakazonaka!
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA October 2014